Resaky ny mpitsimpona akotry : ny dahalo indray no tafika | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : ny dahalo indray no tafika
Tsy hita ho lazaina intsony hoe andian’olon-dratsy fotsiny rehefa miisa 600 lahy ireo dahalo niray dia nampihorohoro ny mpiray tànana tany Mandrosonoro. Efa naman’ny atao hoe tafika izany. Diso ela izay nanjakazakan’ny dahalo izay. Efa ela koa anefa no niposaka ny hevitra fa hany fomba andravana ireo tambajotra ivondronan’ny jiolahy sahy manafika tànana sy vohitra dia ny firotsahan’ny firenena amin’ny fananganana ady sy fanambarana ny dahalo ho fahavalom-pirenena. Tsy resy lahatra anefa ny mpitondra, tsy vonona amin’ny fanaovana tena ady. Tsaingotsaingoka amin’ny “hetsika fampandriana fahalemana” na “operation” mifandimbimby no natao tetika. Izao tsy mahomby izao no vokany. Rehefa tsy vonona amin’ny fanitarana ny ady ho tena izy ny fanjakana dia ny fahavalo ity no mahazo vahana misarisary ho tafika amin’ny fanatevenana ny isan’ireo miaramilany amin’ny fanaovana ratsy.
Maro ny isan’ireo miaramila sy zandary namoy ny ainy tamin’ny fifandonana tamin’ny andian-dahalo. Tsy latsak’
izany koa na tsy resahana firy aza ny isan’ny mponina maty noho ny hetraketraky ny dahalo. Mila fahasahiana pôlitika ny fanambarana ady amin’ny sokajin’olona mpiray tanindrazana. Toy ny fanaovana ady an-trano angamba ny mety ho fandraisana an’izany. Atao akory anefa rehefa misy sahy minia an-kitsirano mivondrona, tsy manana tetika afa-tsy ny handroba fananana sy hamono mponina amin’ny fananiham-bohitra sy fanafihana tànana, efa tsy asan-jiolahy tsotra intsony fa fanafihana ataom-pahavalo.
Tontolo iainan’ny mpiray fonenana amin’ny vohitra maro no ravarava ary ain’olona tsy isaina no afoy isaky ny misy fanafihana. Tsy azo atao hoe sangisangy ny fanatontosana an’izany. Inona ny antony mety atahorana ny fanaovana tena ady ho famongorana ny fitrangan’izany? Tsy azo ailika any amin’ny Tafika sy Zandary ny tsy fahasahiana hifandona amin’ireo jiolahy fa ny fanapahan-kevitra no mareforefo. Ny dahalo niova fo no atao resaka, eo andaniny anefa mitombo an’isa ny andiany mavitrika ka sahy mampiseho tsy fatahorana ny fifandonana amin’ny andian’ny zandary sy miaramila.
Noho ny tranga amin’ny faritra anjakazakan’ny dahalo aloha, noho ny tsy fisian’ny fandriam-pahalemena aty amin’
ny faritra rehetra ary noho ny hamaroan’ny miaramila any an-dakazerina, rariny angamba ny fieritreretana ny fiarovana ny mponina amin’ny fanendrena ny Tafika handray anjara eo amin’ny adidy fampandrian-tany.
Fahasahiana tapany hatrany no tazana entina amerenana ny fandriam-pahalemena. Io fanaovana soa tapany io ihany anefa no mitarika ny fikobanan’ny fiainan’ny mponina. Tsy misy ny feno erany.